Published by ခေါင်ခေါင် under အက်ဆေး on Monday, October 27, 2008
ကျွန်မရဲ့လမင်းဆီက အလင်းတန်းတွေ မှာဆွဲငင်တတ်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်မလမင်းဆီက အလင်းတန်းတွေ ရောင်ပြန်ဟပ် ပြီးရောက်လာတတ်တိုင်း ကျွန်မနှလုံးသား တစ်ခုလုံးတုန်ခိုက်ပြီး ဘာမှမကျန်ရှိတော့သလိုမျိုး လှိုက်ဟာစွာ နာကျင်ပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအလင်းတန်းတွေကို ကျွန်မ မက်မောစွာ စောင့်မျှော်ခဲ့ဖူးတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းလဲ မနည်းခဲ့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ နူးညံ့အေးစိမ့်နေတဲ့ နှလုံးသားပေါ်ကို ကျွန်မလမင်းရဲ့ အလင်းတန်းတွေ ဘယ်တော့မှ ပြန်ရောက်လာမှာလဲ။
Published by ခေါင်ခေါင် under Tag on Friday, October 24, 2008
ဗီလိန် အတွက် ပိုစ့်ပါ.. မအားတဲ့ ကြားကရေးလိုက်ပါပြီ.. သူကတော့ ခုချိန်မှာ ဟက်ပီး ဒီပါပလီ ဆိုပြီး ကေအယ်လ် မှာ ပျော်နေမှာပေါ့။ ကောင်းပါတယ် .. ပျော်ကြပါ။ ပျော်နိုင်ကြပါစေ... ခေါင်ခေါင် ကတော့ အလုပ်တွေ တစ်ပုံကြီးနဲ့ ချာလပတ် ရမ်းနေတုန်းပါပဲ။ အစ်ကိုအမ သူငယ်ချင်း မောင်လေး ညီမလေး အားလုံး ဟက်ပီး ဒီပါပလီ ပါနော်။ ပျော်ရွင်ကြပါစေ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
ဗီလိန်ရေ.. ကျွန်မ မေးခွန်းတွေ ဖြေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရေးထားတယ်။ ကျွန်မလဲ ၁၀၀ ရအောင် ကြိုးစားပြီး ဖြေထားပါတယ်။
၁။ သူ နဲ့ ဘယ်လိုပက်သက်လဲ။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဘော်ဒါပါ။ ကျွန်မ နှိပ်စက်သမျှ သည်းခံတယ်။ အမြဲတမ်း ကျွန်မ ကို စနှုတ်ဆက်တယ်။
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှ အရမ်းကောင်းတဲ့ Relation ရှိတယ်။
ကျွန်မ ပိုစ့်တစ်ခု တင်ရင်း ဘာတွေမှားနှိပ်မိမှန်း မသိဘူး။ အားလုံး ပျောက်ကုန်ရော.. အဲဒါ သူပြန်လုပ်ပေးတယ် အကုန်လုံး ပြန်ရအောင်။ အဲဒိ တုန်းက ကျွန်မ ကဘယ်လို မှ မရတော့လို့ အရမ်းစိတ်ညစ်နေပြီ။ သူက အခါခါ မရရအောင် ပြန်လုပ်ပေးတယ်။ ဗီလိန်... အဲဒိတုန်းက တစ်ကယ်ကျေး ဇူးပဲ။ မပြောရဘူး ဆိုလို့..ခုမှပြောတာ:P
၄။အမှတ်တရ အဖြစ်ဆုံး သူပြောခဲ့တဲ့ စကား-
ကျွန်မ ကိုမင်းသမီးလုပ်တဲ့။ သူက ၂ ကိုယ်ခွဲ မင်းသားရော ဗီလိန်ရော..လုပ်မယ်.. အဲလို ပြောဖူးတယ်။
၆။ကျွန်မချစ်သူဖြစ်လာရင် သူဘာတွေ ပြောင်းလဲရမလဲ-
ဇီဇာ မကြောင်နဲ့. ကျွန်မကို အမြဲနားလည်ပေးဖို့ ကြိုးစား. ကျွန်မက တစ်ခါတစ်လေ ကြောင်တောင်တောင်လေ..
၇။သူက ကျွန်မ ရန်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်-
ကျွန်မသူနဲ့ ဘယ်တော့မှ မတွေ့တော့ဘူး။ သူအကြောင်းဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားတော့ဘူး။
သူကျွန်မ အပေါ်မရိုးသားလို့.. ကျွန်မကို ညာလို့.. အဲဒါကြောင့်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
၉။သူ့အတွက် ဆန္ဒအရှိဆုံး လုပ်ပေးချင်တာလေး-
ကျွန်မချက်တဲ့ ဖြစ်သလို ဟင်းတွေ အတင်းစားခိုင်းမယ်.. ဟီးဟီး
ဗီလိန်ဆိုတဲ့ အတိုင်း တစ်ခုမှ ကောင်းတာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မ ကိုတော့ သည်းခံရှာတယ်။ :P ပြိုင်ပြီးပြောတိုင်း မနိုင်လို့တဲ့.... ။
၁၁။ကျွန်မ အပေါ်ပတ်ဝန်း ကျင်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ-
ဘယ်လိုမှ မမြင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပဲအမြဲ ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။
၁၂။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်မိတဲ့ Characteraistic လေးပြောပြပါ-
Good listening, good social dealing , good interpersonal skill ,easy to make friend, try to honest all da time and so much more.... hee heee :P
၁၃။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမုန်းဆုံး Characteraistics..-
Absent minded, messy, cheeky, chusey, lazy.. :P
၁၄။ကိုယ်အဖြစ်ချင်ဆုံး လူစားမျိုးက -
ကိုယ့်အိမ်မက်တွေ အားလုံး တစ်ကယ်ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူပေါ့
၁၅။ချစ်ခင် ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေကို ပြောချင်တာ-
ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက် .. အကောင်းဘက်က တတ်နိုင်သမျှတွေးပါ.. ဘ၀ဆိုတဲ့ အချိန်က အရမ်းတိုတောင်းတယ်။ ချစ်ခင် ရတဲ့သူတွေ နဲ့ အတုရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားပေးကြပါ။
၁၆။ ကျွန်မ ပြန်တက်ခ် ဖို့ရွေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်း (၁၀) ယောက်ပါ။. တက်ခ် ပိုစ့်တွေ အတွက် အရမ်းအားနာပါတယ်။ အဆင်ပြေမှပဲ ရေးပေးပါ။ ရေးပြီးသားဆိုလဲ ရပါတယ်။ Enjoy!
၁၇။ ၇ ယောက်မြောက်လူနဲ့ ဘယ်လိုပက်သက်လဲ-(သတိုးရာဇာ)
သတိုးလား .. အမြဲတမ်း Fighting play နေကြတယ်လေ။ မယုံရင် မေးကြည့် ။ ခေါင်ခေါင်ကို ကြောက်လားလို့..။
၁၈။ ၉ ယောက်မြောက်က ယောက်ျားလား ၊ မိန်းမလား။(ကိုဂစ်တာ)
ယောက်ျားပါ။ အရမ်းရစ်တတ်တဲ့ ယောက်က်ျား..။
၁၉။ ၆ နဲ့ ၉ နဲ့ အတူရှိနေရင် ကောင်းပါသလား။(ငွန်ငယ် နဲ့ ကိုဂစ်တာ)
မကောင်းဘူးထင်တယ်။ တစ်ယောက် က နိုင်ငံရေးသမား . တစ်ယောက်က ကဗျာဆရာ..
၂၀။ ၂ ယောက် မြောက်ကဘာတွေ သင်ကြားနေလဲ( သဉ္စာ)
အခု သင်နေတာ တော့ တရုတ်ပြည် က တရုတ်ကျောင်း မှာ တရုတ်စာတွေ သင်နေတယ်။ ရည်ရွက်ချက်ကတော့ ဘာလဲသိဘူး....:P
၂၁။ ၃ ယောက်မြောက်နဲ့ စကားစမြည် ပြောခဲ့တဲ့ အချိန်လေး။ (မောင်လေး သံလွင်)
၂၂။ ဂ ယောက်မြောက် ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်တွေ...(သက်တန့်)
မျိုးကြီး၊ အငဲ။ လေးဖြူ တဲ့ သူလဲ IC ပဲ။
၂၃။ ၁ မှာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ရှိလား။ (ငါးလေး)
ညီတစ်ယောက် ညီမ တစ်ယောက် ရှိတယ်။
၂၄။ ၃ ရဲ့ အချစ်ကို ရယူဖို့ အစီအစဉ် ရှိလား။ (မောင်လေး သံလွင်)
နေဦး David နဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်. :P
၂၅။ ၇ ယောက်မြောက် ကိုရော... ( သတိုးရာဇာ)
ရှိတယ်။ ကြံနေတာ ကြာပြီလေ. :P
၂၆။ ၄ ယောက်မြောက် ကရော လူလွတ်ပဲလား .( ဗီလိန်)
ဟုတ်ဘူး။ ကလေး အဖေ.. သူ့ကလေး ၂ ယောက်က အမွှာပူး။
၂၇။ ၅ ယောက်မြောက် ရဲ့ နာမည် အရင်းကိုသိလား။( အိမ်)
သိဘူး။ Nick ပဲ သိတယ်။
၂၈။ ၄ ယောက်မြောက် ရဲ့ ၀ါသနာ ကဘာလဲ ( ဗီလိန်)
သူများကို ဒုက္ခ ပေးဖို့ ၊ မကောင်းကြံဖို့၊
၂၉။ ၅ နဲ့ ၆ ရဲ့ နှစ်ယောက်ကြားက အခြေအနေ ( အိမ် နဲ့ ငွန်ငယ်)
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိတောင် မသိဘူးနဲ့ တူတယ်။
၃၀။ ၁ယောက်မြောက် သူငယ်ချင်းက ဘယ်မှာ ပညာ သင်ကြားနေလဲ ( ငါးလေး)
Moscow မှာ ကွန်ပျူတာ တွေ ကို ဘယ်လို ကလိ ရမလဲ သင်နေတယ်။ ခုလောလောဆယ်တော့ သူပြင်ပေးလိုက်လို့ ကျွန်မ လက်ပတော့ ဘာသံမှ မထွက်တော့ဘူး။
၃၁။ ၆ ယောက်မြောက်သူ ငယ်ချင်း အကြောင်းလေး ပြောပြပါ (ငွန်ငယ်)
တစ်မြို့ထဲ နေခဲ့ကြဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလေ .. ဒီတစ်ပါတ် တနင်္ဂနွေ သူတို့ အိမ်မှာ အလှု ရှိတယ်။ သွားစားမလို့..။
၃၂။ ၈ ယောက်မြောက် အပေါ်မှာ ခံစားချက် များများ ထားခဲ့ဖူးလား။(သက်တန့်)
ထားတာပေါ့။ ဘိုးက သူ့မောင်လေး နဲ့သဘောတူတယ်တဲ့.. အတင်းကြီးပဲ.. :P
၃၃။ ၉ ယောက်မြောက် သူငယ်ချင်း ကဘယ်မှာနေတာလဲ။( ကိုဂစ်တာ)
၃၄။ ၃ ယောက်မြောက် သူငယ်ချင်းက ဘာအရောင်ကြိုက်လဲ။ ( မောင်လေး သံလွင်)
အပြာရောင် ထင်တာပဲ။ သူ့မွေးနေ့ မှာ ၀တ်ထားတာ အကျီက အပြာရောင်လေး..
၃၅။ ၅ နဲ့ ၆ က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ လား( အိမ် နဲ့ ငွန်ငယ်)
နောက်တော့ ဖြစ်လာမယ် ထင်တယ်။
၃၆။ ၁ ယောက်မြောက် မှာ အိမ်မွေးးတိရိစ္ဆာန် ရှိလား။ ( ငါးလေး)
ဒီကောင်က ကြောင်ဆို အသေချစ်လေ။ ကြောင်တစ်ကောင်တော့ ရှိပါ့။
၃၇။ ၂ က စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး sexiest person လား? ( သဉ္စာ)
တိုင်ကွယ်ပြီးကြည့် ရင်တော့ so sexy.. he hee :P ( သယ်ရင်း စိတ်ဆိုးနဲ့)
၃၈။ ၁၀ ယောက်မြောက်က ဘာတွေ လုပ်နေလဲ( ကိုမိုးသား)
( ဘလောဂင်း အကြောင်း သေသေချာချာ သိအောင် လုပ်နေတယ် ထင်တယ်။ ခဏ ခဏ လာမေးလို့လေ.. :P )
တက်ခ် တဲ့ သူရော.. တက်ခ် ခံ လိုက်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းတို့ရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
enjoy in my post! love you all :P :P
It's about to tag me from my naughty , messy , cutie brother " ThanLwinHero".( You make me small, hah, anyway I posted for you, besides I am going damn busy.. ). ok, check it out..
(1) Your relationship with him:
Dude.., we are going very well. rite?
(2)Your five impression of him:
1st - Funny
2nd - Good attitude
3rd - Outgoing
4th - Optimitics
5th - Naughty and playful ( dude, am i rite? )
(3)The most memorable thing that he had done for you:
My dude, gonna be in my ever lasting memory, cus he remember me tag ever :P then, he was my fri's fri also but he didn't tell me about it foralong time. see? how naughty!
(4)The most memorable thing that he had said to you:
He push me out in his one post, i am the 1st one gal he met in blog .I was so pleased in it.
(5)If he become your lover ,you will:
I'll never let him go by my side. :P
(6)If he become your lover, thing he have to improve:
Have to patient my chusey mind, have to love me only , even dun hav to lookin at other gals.
(7)If he become your enemy, you will:
Never try to meet him again.Never pick up his call. Just forget abt him.
(8)If he become your enemy, the reson will be:
May be , he did't honest in me, mean he tried to lie me.
(9)The most desired thing you want to do for him now is:
Want to help him, for his assignments and exams.
(10)Your overall impression of him:
He's pretty good guy, wid nice heart.
Dude, hope u feel well in it. xo much thk for sharing. pls, u read on the rest questions for Villain post, i better try to write MM to be feel free all my fris. ok? by da way, give my love to my jit fri, David.. :P.. All da best.
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Sunday, October 19, 2008
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Friday, October 17, 2008
လက်ရေးလှသလောက် ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့လက်
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဖမ်းဆုပ်ဖို့ တစ်ခါမှ မသေချာတဲ့လက်
၀တ်ကျေတမ်းကျေ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ရမှာတွေ ကိုမ၀ံ့ရဲတဲ့လက်
တစ်နေ့မှာ လက်ချည်းသက်သက် ပြန်လာရမှာ သေချာနေတဲ့လက်
ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ ဘယ်တော့မှ သဟဇာတ မဖြစ်တဲ့လက်
တည်ဆောက်ဖန်တီးဖို့ထက် ချေမွဖျက်ဆီးဖို့ ပိုအားသန်တဲ့လက်
Published by ခေါင်ခေါင် under Tag on Monday, October 06, 2008
စာရေးကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းပန်းချီ ဆရာမ နန်းညီ တက်(Tag) ထားတာလေးပါ။ သူငယ်ချင်းကို ဖတ်စေချင်တော့လည်း မနဲကုတ်ကပ်စဉ်းစားပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။ အကြာကြီးနေမှ ရေးဖြစ်လို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဆရာမရေ။ကဲ ဆရာမနန်းညီရေ... စိတ်ကြိုက်သာဖတ်တော့နော်။ နန်းညီ လိုတော့ ကျွန်မက ဗဟုသုတရအောင် ရသမြောက်အောင် မရေးတတ်ဘူး။ ကျွန်မက ပေါက်ကရတွေပဲ ရေးတတ်တာလေ။ကဲရေးပြီနော်... ။
ကျွန်မငယ်ငယ်လေးထဲက ဖြစ်သလိုစားတတ်ပါတယ်။ ကြုံရာစားတယ်။အစားအသောက်ကို လဲသိပ်ဂျီးမများ ပါဘူး။အစားအသောက်အတွက် သိပ်ပြီးလဲအပင်ပန်းမခံဘူး။ အချိန်ကုန်မခံဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ချက်ပြုတ်ရမှာကို စိတ်လဲမရှည်ဘူး။ ပျင်းတာလဲပါတယ်။တစ်ခြားအိမ်အလုပ်တွေကိုသာ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပစ်ချင်တယ်။ ချက်ပြုတ်ကျော်လှော်ရမှာကိုတော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး။ မလုပ်ချင်ဘူး။ ကျွန်မ အမေ့အိမ်ရောက်တဲ့ အချိန်တွေတိုင်း ဟင်းတွေဖွယ်ဖွယ်ရာရာ အမေကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးတယ်။ အမေက ဘာဟင်းစားချင်လဲ လို့မေးရင်.ကိုယ့်ဟာကိုလည်း ဘာကြိုက်မှန်းမသိလို့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး။ အကုန်လုံး စားလို့ရတယ်။တရုတ်စာ ၊ကုလားစာ၊မြန်မာစာ၊ ရှမ်းစာ အကုန်ကျွန်မနဲ့အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်မ မကြိုက်တဲ့ ဟင်း၊ မစားဘူးဆိုတဲ့ ဟင်းလဲ မရှိသလောက်ပါပဲ။
ကျွန်မတစ်ဘ၀လုံးတစ်ယောက်ထဲ နေတာများတော့ ဖြစ်သလိုစားတဲ့အကျင့်ကလဲ အရိုးစွဲနေပါတယ်။ စားချင်စား မစားချင်မစားနဲ့ ထမင်းနပ်ပေါင်းများစွာကို ကြုံသလိုပဲ စားခဲ့လို့ ကျွန်မအစာအိမ်ကလဲ သိပ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာရှိတုန်းက မနက် ၇နာရီကနေ အိမ်က စထွက်လိုက်တာ သင်တန်း ၊ အလုပ်၊ စာသင်နဲ့ တစ်ခါတစ်ခါတစ်လေ. ည၁၂ နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်တယ်။ တစ်နေကုန်ကို ကြုံတဲ့ နေရာမှာ အဆင်ပြေသလိုစားပါတယ်။ ကျွန်မအများဆုံး စားဖြစ်တာ လှည်းတန်း ၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းထဲက ထမင်းသုတ်ပဲ။ ကြာဇံချက်နဲ့ ထမင်းသုတ် ကျွန်မအမြဲစားတယ်။ ပြန်ပြီးတောင်စားချင်လာပြီ။ အိမ်မှာ ဖြစ်သလိုစားရင် တော့ ကြက်ဥနဲ့ ထမင်းကို ရောကြော်ပြီးစားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ လက်ဘက်သုတ်နဲ့။ လက်ဘက်သုတ်လဲ ကျွန်မအရမ်းကြိုက်တာ။ another တစ်ခါတစ်လေမှာ တော့ဖြစ်သလို အချစ်ဆုံးတွေနဲ့ Black Canyonတို့ Eugenia တို့မှာ ပဲသွားစားလိုက်တယ်လေ။
ဒီကိုရောက်လာတော့ ဘ၀က ပိုပြီးဆိုးသွားတယ်။ကျွန်မဈေးလဲမသွားချင်ဘူး။ ချက်လဲမချက်ချင်ဘူး။ သူများအိမ်မှာ သွားကပ်စားရတာလဲ ခဏခဏဆိုတော့ မကောင်းတော့ဘူး။ အပြင်ကနေလဲ ကျွန်မ ခဏခဏ ၀ယ်မစားနိုင်ဘူး။ အဲဒိတော့ ကျာင်းကနေ မောမောနဲ့ပြန်လာတဲ့ အခါ ကျွန်မအများဆုံးစားဖြစ်တာကတော့ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပါပဲ။ ဗိုက်ဆာနေတော့လဲ ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိဘူး။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲကို ထမင်းချက်ရင်းနဲ့ ငါးသေတ္တာ ဗူးကိုပါ ဖောက်ထည့်ထားလိုက်တာ။ ထမင်းလဲ ကျက် အဆင့်သင့်စားရုံပဲ။ အနီရောင် ထမင်းလို့ ကျွန်မဘာသာ ခေါ်တယ်။ ကျွန်မ ရဲ့အနီရောင် ထမင်းထဲကို ခရမ်းချဉ်သီး ဆော့တွေ အများကြီးထည့်ပြီးစားတယ်။ တစ်ကယ်ကောင်းတယ်။ မယုံရင် စမ်းချက်ပြီးစားကြည့်ပါ။
ဒီနေ့တော့ ကျွန်မ ဧည့်သည်တွေနဲ့ တူတူ BOMBAY MAGIC မှာညစာ စားခဲ့တယ်။ ကုမ္မဏီက ကျွေးတာလေ။ သူတို့တွေပျော်နေတာတွေ့တော့ ကျွန်မလဲပျော်တယ်။ ကျွန်မအတွက် ပျော်စရာ ညစာစားပွဲ တွေ ၊ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း လူတွေ အများကြီးနဲ့ အရသာရှိရှိစားရတဲ့ စားပွဲတွေနဲ့ဝေးကွာနေတာ တော်တော်လေးတော့ ကြာနေပြီ။ တော်တော်လေးကြာပေမယ့်လည်း ကျွန်မက ဖြစ်သလိုစားတတ်တဲ့ သူဆိုတော့ ပြသာနာမရှိဘူးလေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခဏခဏ ကျွန်မ ဖြစ်သလိုစားနေပါတယ်။
ကျွန်မဖြစ်သလို စားတဲ့ အကြောင်းပြီးပါပြီ။
နန်းညီ တက် လို့ ကျွန်မ ရေးပြီးသွားပါပြီ။ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့မသိဘူး။ ရေးချင်တာတွေ ရေးချလိုက်တာပဲ။ ဆက်လက်ပြီး .. ကျွန်မ တက် လိုက်တဲ့ ကံထူးရှင်များကတော့.....
တို့ သုံးယောက်ပါ။ မြန်မြန်လေး ရေးပေးကြပါ။ ကျေးဇူးရှင်တို့ရေ... နော်။
Published by ခေါင်ခေါင် under ကျေးဇူး.. on Saturday, October 04, 2008
ကျွန်မ ဘလော့လေးအား လာလည်ပေးကြသော မောင်နှမ များ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်.
အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ပါလက်ပါ ကွန်မန့်များ ရေးပေးကြတဲ့ အစ်ကို များ အစ်မ များကိုလည်း ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။ ကျွန်မအခုလောလောဆယ် အခြေအနေမှာ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အလုပ်တွေရှုပ်နေပါတယ်ရှင်။ နေ့တွေညတွေ မရှိသလို ၊စနေ တနင်္ဂနွေ တွေပါရှုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကြောင့်ပါ။ ကျွန်မပိုစ့်အသစ်ရေးပြီး မတင်နိုင်သလို ဘလော့တွေလဲ မလည်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဘလော့ လေးကို အမြဲလာလည်ပြီး အမှတ်တရလေးတွေ ရေးပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ၊အစ်ကိုများ အစ်မများ အားလုံးကို တစ်ကယ့်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းလေး ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ သူငယ်ချင်းနန်းညီရဲ့ တက် ထားတဲ့ ပိုစ့်လေး လည်းအကြွေးမှတ်ထားပါဦးနော်။ အားတာနဲ့ ချက်ချင်းကို ရေးမှာပါ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ ကျွန်မက ပေါက်ကရခြောက်ဆယ်သာ လျှောက်ရေးတတ်တာ ကျေးဇူးတင်စကားကျ တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မပြောတတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းများ အစ်ကိုများ အစ်မများ အားလုံး အရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ။ ချစ်ခင်ရသော သူများနဲ့ကွေကွင်းရခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ ရှင်။
I love you all, all the best.